The Ultimate Guide to Testosterone decanoate for Bodybuilding
1. Chii chinonzi Testosterone decanoate? Chinoshanda sei?
Testosterone decanoate (5721-91-5) iri pakati pe steroid yakashandiswa zvikuru pamusika nevatambi uye mizimba. Mishonga iyi inotengeswa pasi pemazita akasiyana mazita mumisika dzakasiyana-siyana, asi Neotest 250 yakabuda semutauro unozivikanwa zvikuru weti testosterone decanoate. Ichi chemishonga chakatanga kugadzirwa sechirwere chezvokurapa zvisikwa zvisati zvaonekwa kuti zvingabatsira varimi kuti vabudirire basa ravo. Neotest 250 inobudiswa uye inosanganiswa neester ester imwe yakabva kune testosterone decanoate. Kutaura zvazviri, iyi ester imwe yakasanganiswa ndeimwe yezvinyorwa zvitsva pamusika nhasi, uye iwe unogona kungozviwana sechikamu chekusanganiswa kusanganiswa. Neotest single ester supplement inoshandiswa sechikamu chehuwandu hwakasiyana-siyana hwetestrosterone zvakakanganiswa zvakadai seOnnadren uye Sustanon 250 kuti titaure zvishomanana. Nhasi, zvingakuomera kuti uwane Neotest 250 pamusika.
Sezvambotaurwa kare, decanoate ndeyeta yakareba iyo inowanzobatanidzwa kune dzakasiyana-siyana vanabolic steroids kuti iite kuti vagovere migumisiro yakanakisisa uye varambe vari mumuviri wenyu yehurumende kwenguva yakawedzerwa. Testosterone decanoate (5721-91-5) injectable anabolic steroid inoreva kuti iwe unofanira kuvhara muyero wako mukati mezvidimbu zvakataurwa nachiremba wako kwese. Esters haisi kupindira nekwanisi uye mabasa e testosterone, asi inogonesa kemukari kuti iite kwenguva yakareba. Eesters yakareba inoshandura kune imwe nguva yakawanda yehupiti-testosterone inoshanda mumuviri wako, asi esters shoma zvinoreva kuti mishonga ichave nehupenyu hupfupi. Nhanho iyo testosterone decanoate inosunungurwa mumuviri wako inogonesa kugadzikana uye kunogara kwakakwana kwe testosterone hormone uye inoshingaira mushure mokunge injini imwe chete.
Testosterone decanoate (5721-91-5) ine chikwangwani che androgenic cha 100 / 100. Izvi zviyero kana zvikoro zvinoshandiswa pakuyera simba reesebolic steroid yose pamusika. Iyi steroid inobata hafu yehupenyu hurefu uye yakaenzana iyo inorohwa muhutano hwemuviri wako kupfuura testosterone cypionate iyo inonzi inopa zviitiko zvakafanana. Saka, izvi zvinogadzira Neotest 250 mhinduro yakanakisisa yekurapa kupererwa kwe testosterone. Chimwe chikamu chakanaka che testosterone decanoate ndechokuti yakambojowa; muviri wako haugoni kuzvisiyanisa kubva kune zvakasikwa zvinoreva kuti iwe uchafara nemigumisiro yakanaka kwazvo pakuguma kwekufamba kwako.
Chirwere ichi chinoshanda sehutachiona chetrosterone hormone inoita kuti varume vave nemafungiro akadai sekukura kwembebvu, kuwedzerwa kwezwi nekuvakwa kwematumbo pakati pevamwe. Testosterone hormone inofanirwawo kuita zvepabonde zvakanyanya kune varume uye inokurudzirwa kune varwere vane erectile dysfunction kana simba. Kunyange zvakadaro, testosterone hormone chaiyo inogona kunge isingakwanisi kubatsira vatambi kana kuti vashandi vemuviri kuti vawane simba romuviri nemafuta. Ndicho chikonzero nei vatambi vakawanda vanosarudza kutora steroid kuti vashandise testosterone hormone kugadzirwa mumuviri. Kuenderana nemutero wako we testosterone neyokudya kwakakodzera uye kubasa kunogona kuita kuti zvive nyore kwauri kuti uwane zvinangwa zvako munguva pfupi nguva yakaita.
Nyaya inonyanyozivikanwa ye testosterone decanoate (5721-91-5) inosanganiswa pamusika yose yakagadzirirwa kugadzirisa dambudziko re testosterone hormone dambudziko. Mukadzi wepakutanga Omnadren aiva neCaproate ester panzvimbo ye decanoate ester, asi mhemberero ino ine testosterone decanoate ester mushure mekuziva kuti inoshanda uye inosanganiswa ne1ml ampule. Izvo zvinounza Neotest mutevedzeri wekero rose ku250mg, uye kuputsika kunotevera;
Imwe chokwadi chinonakidza pamusoro peNeotest kuwedzera ndeyekuti yakagadzirirwa kukurudzira kushanda, kusiyana nechepakutanga testosterone decanoate iyo yainyanya kuitirwa kubatsira varwere vane dambudziko rekutengesa testosterone. Zvisinei, kunyange kana pasina anozivikanwa anogadzira ari kubudisa Neotest 250, basa rayo ndizvo chaizvoizvo mutambi wose nemuumbi wezvinhu ari kutsvaga kuti apfuure mune basa rake remitambo. Testosterone decanoate inonyanya kuwedzera iyo inobatsira mukuvandudza masero matsvuku eropa mumutumbi wako, kusimudzira nitrogen kuchengetedza pamwe nekuvandudza protein synthesis.
Nokuda kwezvimwe zvinhu zvakafanana please please reference article Kusiyana Kwakaipisisa Pakati Pekuedzwa Kuyananisira uye Kuedzwa Tsitsi
2. Testosterone decanoate Uses
Pakutanga, apo mishonga yakagadzirwa muMexico, yakashandiswa pakutsvaga zvezvokurapa, asi nhasi chimiro chinoshandiswa nevanhu. Testosterone yave yakakosha mune zvose zvezvokurapa uye zvemitambo. Vagadziri vemuviri vave vachishandisa kemukari kwemakore akawanda, uye yakaratidza kuva yakanakisisa pakupa mishonga yemhando. Iye zvino, pasinei nemishonga chete iripo kuwanika pasi pebasa rakadzika pasi, rinoramba richirwisa zvakanyanya kudiwa kubva kune vatambi pamwe chete navanachiremba kurapa varwere vane matambudziko akasiyana-siyana e testosterone.
Varume kunyanya vanoshandisa testosterone decanoate pasi pemishonga inogadziriswa semhinduro yekudzika testosterone hormone production. Chaizvoizvo, chigadzirwa chacho chinoshandiswa mu testosterone replacement therapy kuti ibatsire varwere vanhurume kudzoka uye kudzokera kune hupenyu hunhu. Kushaikwa kwe testosterone hormone mumuviri kunogona kutungamirira kumatambudziko akasiyana-siyana akadai sepidesi yakaderera, kusava nesimba kana kunyange erectile kudzvinyirira pamwe nekuvandudza mazinga emafuta emumuviri ari kuiswa pachifuva nemuchiuno. Pane zvakawanda zvinetso zvehutano zvakanyanya muvarume izvo zvinokonzerwa nehutsika hwe testosterone hormone. Paunenge uchitambura nenyaya dzakadai, chiremba wako achagara achikurudzira kushandiswa kwe testosterone decanoate.
Kune rumwe rutivi, testosterone decanoate inoshandiswawo mukurapa kwezvirwere zvinokonzera kuderedzwa kwemasimba akawanda seAIDS neAIDS. Varwere vachatoda kuvaka mishonga pamwe nekuwedzera simba remuviri wavo. Kwemakore akawanda, vanachiremba vakabudirira kushandisa steroid anabolic kubatsira varwere kuwana nekuchengetedza mishonga yavo vachiri kurapwa kwechirwere chikuru. Zvisinei, kana iwe une dambudziko iri usangotenga chiremba kunyange kana iwe uchigona kuhuwana nyore nyore usati wagamuchirwa kana kuti chiremba kubva kuchiremba wako. Yakataurawo kuti testosterone decanoate inogona kubatsirawo vashandisi kuvandudza pfungwa dzavo uye kugadzirisa dambudziko rekushaya hope. Sezvo iyi steroid anabolic inowedzera kubudiswa kwemasero matsvuku eropa, zvisinei hazvisi pachena kana mishonga inogona kubatsira mukurapwa kweanemia. Vamwe vanotsvakurudza vari kuita zvidzidzo kuti vaone kana chidimbu chacho chinogona kubatsira vanhu vane chirwere chekushaya ropa.
Mumutambo wenyika, testosterone decanoate (5721-91-5) yakaratidza kuti inoshanda pakubatsira vatambi uye vashandi vemuviri kugadzirisa zvinangwa zvavo. Kusava nesimba kwemuviri kwakakwana ndicho chikonzero chikuru nei vatambi vakawanda vasingakwanisi kukwikwidza zvakanaka kana kutokwanisa kukunda makwikwi avo. Zvisinei, testosterone decanoate yakaratidza kuva chikomborero kune vakawanda vatambi vechikwata. Kune vashandi vekuda vanoda kuwana hutano hwemhando uye simba kuti vashande zvakanaka, ichi chinodhaka ndizvo zvavanoda. Kana zvakakoswa zvakakodzera kana zvichienderana nekudya kwakakodzera uye kudzidziswa, inopa hutsika huno hutsika. Iyo mishonga inogona kuvandudza nitrogen kuchengetedza mumatumbu ako, iyo ndiyo yakakosha yezvibereko zvehutano hwemasimba.
Mukuwedzera, testosterone decanoate inowedzerawo kubudiswa kwemasero matsvuku eropa ayo anozovimbisa kuti kune huwandu hunogadziriswa hwezvibereko kumasumbu. Kazhinji, paunoshanda kwenguva yakareba kunyanya mukudengenyeka, mishonga yako inogona kubvarura kana kutambanudza zvichikonzera marwadzo. Zvisinei, kupiwa kwakakwana kwezvibereko kunovimbisa kuti muviri unobatanidza kuporesa zvakasikwa uye munguva pfupi nguva inogona kuitika. Izvi zvinobatsirawo mumatomu ekusimudzirwa uye nekuvandudzwa kwesimba remuviri. Kana majoini ako kana kurwadziwa kwemutsipa zvakapedza nguva yakawanda kudarika kuzivisa chiremba wako panguva yakanaka. Iva nechokwadi chokuti unyanzvi wako wekudya uye mudzidzisi anozivawo kuti uri kushandisa testosterone decanoate kana imwe steroid.
3. Testosterone decanoate muyero
Iye zvino, zvakaoma kuwana testosterone decanoate dosage sekuwedzera kubatsiri kubvira apo pane pane anozivikanwa anogadzira pamusika. Iyo kemukari inowanikwa yakawanda seyakakanganiswa kana kusanganiswa kweimwe chikwata che testosterone. Saka, zvichava zvakaoma kuti chiremba wako ataure kuti testosterone decanoate oga kunze kwekuti iwe ukashandisa imwe chidimbu chinenge chiwedzere sechikamu chemishonga. Kutsvaga Neotest 250 pamabhandi pasi pevhu kana mumusika wemusika unogona kuva nenguva yakaoma sezvo vazhinji marabhu vasingambovi nemishonga. Nokudaro, zvinokurudzirwa kutarisa testosterone decanoate sekubatana neSustanon kana Omnadren. Kune rumwe rutivi, iwe unogona kuwana nyore nyore testosterone decanoate paIndaneti kubva kune vanogadzira vatengesi kana vatengesi. Ita tsvakurudzo yako kuti unzwisise kuti mutengesi kana mugadziri anoshanda sei kuti arege kuora mwoyo.
Zvose mune zvose, mushure mokunge mishonga yacho iine huwandu hwehuwandu huri nehuwandu hwe500mg kwevhiki nekudaro kana uchida kusimbisa hutano hwako hwose. Nhamba iyo ichava yakakwana kuti varwere vane zviratidzo zvepasi zve testosterone. Kana muviri wako uchishandiswa Neotest 250, chiremba wako anogona kukukurudzira kuti utore dhesiti yakakura kubva pa 750mg kusvika ku100mg kwevhiki. Vakuru veNeotest 250 vashandisi vevarume vanotora zvishoma zvishoma ne500mg kwevhiki vamwe vachiita zvakakwirira kudarika izvozvo; zvose zvinoenderana nemuviri wako kushivirira. Zvisinei, zvinokurudzirwa kuti ubvunze chiremba wako kuti akubatsire kugadzirisa dhaiti yakakodzera kwauri. Dzimwe nguva, vashandisi vezvinodhaka vanogona kutora madhoji akaderera uye vane humbo hwakanyanya hunoita kuti chiremba atadze kuderedza dhegi zvakare.
Zvinogona zvakare kuti vamwe vashandisi vatore dhosi dzakakwirira uye vachiri kukundikana kuona zvinowanikwa. Mitumbi yevanhu yakasiyana, uye ichi chikonzero nei zvichikosha kuenda kuchipatara kuongorora uye mushure mekutora testosterone decanoate. Kunewo vamwe vashandisi vanotarisana nemigumisiro yakakomba pavanotora Neotest 250 dhesi yakakwirira. Funga kune dheti yakatarwa nachiremba wako uye edzawo kuti iwe unotora majekiseni nenzira yakarurama. Kana iwe usina chokwadi nezvekuzvirwisa iwe, zivisa chiremba wako kuti akudzidzise nzira yekupa mishonga iyi. Unprofessional injection administration inogona kutungamirira kuhutano hwehutano. Neotest 250 inogonawo kuva sarudzo yakanakisisa kune vavanakomana vanotambura nekutapura testosterone kunokonzerwa nekushandiswa kwevana vanabolic steroid. Pano muyero we250mgs pazuva re 7 / 10 huchakwanika kuti mahomoni adzokere zvakare munzira yakarurama.
Zviratidzo zve testosterone decanoate zvinogona kuva zvinorwadza, asi izvozvo hazvifaniri kuva dambudziko sezvo iwe unonzwisisa zvaunoshuva kubudirira pakuguma kwemhepo. Iwe unogona kuchinja nzvimbo dzejojo ​​kuti urege kurwadziwa kusingaperi, asi chiremba wako anogona kukupawo mamwe mishonga kuti ikubatsire kudzora chirwere chinorwadza marwadzo. Zvisinei, iwe unofanira kungozvivhara kamwe kamwe muvhiki sezvo iri nguva yakareba ester. Izvozvo zvichakupa nguva yakakwana yekuwana musati waita jira rinotevera. Kana urombo huripo, zivisa chiremba wako pakarepo. Kuti ugare wakachengeteka zvakare, iva nechokwadi chokuti unonamatira kumirairo inopiwa nemishonga yako uye unoita kuti iwe uende kuongororwa nguva dzose yezvechiremba uchitsvaga kufamba kwako.
Chiremba wako angave ari munhu akakodzera kuti agadzire zvakakodzera testosterone demoti uye dheti zvichienderana nezvaunoda kuzadzikisa. Mune zviitiko zvakawanda, mavhareji akaenzana ari kubva kuma8 kusvika kumavhiki e12 kana kupfuura. Vaya vanoshandisa chiremba nokuda kwechiremba vanowanzoshandisa steroid kwemashure maduku e8 kusvika kumavhiki e10. Kune rumwe rutivi, vatambi uye vashandi vemiviri vanoedza kuwana masimba emumucheto pakupera kwekufamba-famba vachatofanira kuenda kumagetsi akawanda emasvondo e12 uye dzimwe nguva chiremba anogona kuwedzera marongerwo emigumisiro yakanaka.
Zvimwe zvinhu zvinogonawo kuchinja urefu hwehutano hwakadai semuprosterone inoshandiswa iwe uri kushandisa, uye imwe anabolic steroid uri kutora panguva imwe chete. Zvisinei, kusakwanisa kuzivikanwa testosterone decanoate mugadziri iyo imwewo dambudziko iro vakawanda vanoshandisa kubva apo vanofanira kuvimba zvikuru kuvanachiremba vavo pakufamba uye kuenzanisa kuisa. Kana iwe usingaiti zvakakosha zvinogadziriswa pamusangano wakatarwa, udza chiremba wako kuti awedzere iyo kwemavhiki mashomanana kana kunyange kuwedza kuyerwa. Zvisinei, zvinonzi iyo yakawanda inotora, iyo yakakonzera njodzi dzekutarisana nemigumisiro. Kuzadzisa zvinangwa zvako zvinoreva kuti iwe unofanira kuzvipira uye testosterone decanoate madhara anogona kuregererwa achitakura mupfungwa mhinduro dzakanaka dzaunoshingaira kuti uwane pakupera kwezuva.
5.Testosterone decanoate results
Kungofanana nedzimwe mishonga, testosterone decanoate inopa zvose zvakanaka uye zvisina kunaka zvigaro zvichienderana nezvichaita sei nemuviri wako. Vamwe vashandisi vanofadzwa nemakemikari akawanda kuitira kuti vatambi ndivo vanonyanya kubatsirwa nehuwandu hwevanabolic steroid. Kana iwe unodarika kana steroid anabolic isingakushandi, pane mikana yakawanda yekutarisana nemigumisiro yakakomba iyo ichakurukurwa gare gare munyaya ino. Izvo hazvina mubvunzo kuti testosterone decanoate inowedzera kuwedzera iyo inowanzowanika mune zvakasiyana-siyana zve testosterone.
Chinhu chinokonzera testosterone chichigadzirisa migumisiro?
Iyi anabolic steroid yakaratidza kupa migumisiro yakanaka kana inoshandiswa mune zvose zvekurapa uye mumitambo yenyika. Vashandi vanofarira zvinotevera zvinobatsira pakuguma kwekufamba;
Ichi chigadzirwa chinowanzobata maitiro evashandi ve testosterone. Kana iyo yakashandisa pasi ye testosterone, inoreva kuti miviri yavo haisi kubereka zvakakwana zvehomoni iyi. Low testosterone nemigumisiro inobva pamigumisiro yakasiyana-siyana uye inouya nezviratidzo zvakasiyana-siyana zvakadai sokurasikirwa kwepabonde, kurwisa kwe erectile, uye kuora mwoyo, kurasikirwa kwenguva yakati, kusava nehope, kuderedza misi miviri uye kurasikirwa kwesimba mumamwe zviratidzo. Kana ukawana chero chezviratidzo izvi, mikana ndeyokuti iwe uri nechepasi chetestrostone, chimwe chinhu chinogona kurapwa uchishandisa Testosterone decanoate. Ichawedzera huwandu hwe testosterone inoshanda uye kubvisa zviratidzo zvinotaurwa pamusoro apa.
Nokutora Testosterone decanoate, iwe uchave uchibvisa njodzi dzekukura kweAlzheimer's, chirwere chemoyo, kanhi yeProstate, uye osteoporosis. Iyo mhinduro yakakwana yokubvisa mamiriro acho uye kudzorera muviri wako kumabasa ayo chaiwo. Vanachiremba vakawanda vacharayira kushandiswa kwe testosterone decanoate kune chero murwere anowanikwa nezvirwere izvi. Iyi anabolic steroid yave iri chikomborero munyika yezvokurapa sezvo yakawanikwa kuti inogona kubatsira zvikuru mukurapa zviratidzo zvakasiyana zve testosterone.
Kune vateereri vemitambo kana kuti varimi venyama vanofarira kusimbisa basa ravo, izvi zvinowedzera zvakanakisisa kune zve--mwaka uye nguva yevatambi. Nokuti anotanga, ichavabatsira pakuvandudza kwemaonda emasimba, uye ivo vachakura vakasimba zuva rega rega. Chigadzirwa chinobatsirawo mumuviri pakurasikirwa, izvo zvakanakisisa kune vari kunze--mutambo wenhabvu sezvo zvichivabatsira kuchengetedza muviri wavo pasina kunetseka kuti vanogona kurasikirwa nemasisita mashoma. Testosterone decanoate bodybuilding inokosha mune zvose zvakagadzirwa nekuchera uye kubvongodza. Iyo mishonga inosimudzira nitrogen kuchengetedza iyo inoita kuti mishonga yako isanyatsogadzikana mukucheka maitiro kana iwe uchicheka mafuta akawanda. Mukudengenyeka kana iwe uchida kuwedzera mamwe mapaundi kana musimba, zvinodhaka zvinowedzera musimba kukura.
Zvakanakisisa zvinotarisirwa kutarisira mushure memashandisi ekuwedzera ndezvokudya zvakanaka uye kuderedza chikamu. Izvi nokuvabvumira vatambi kuti vawane kudya vasingarasikirwi musimba wavo wakaonda. Uyewo, vanogona kuderedza aster mafuta nokuda kwekukura kwemasabolism. Steroid inowedzerawo kubudiswa kwemasero matsvuku eropa zvinoreva kuti mishonga yako ichawana kugadzikana kwezvibereko kuitira kukura nyore uye kugadzirwa kwezvisikwa. Musoro we testosterone hormone mumuviri wemutambi inokosha zvikuru mukumuita kuti ave nemigumisiro inoda.
Chinokosha ndechokuti mushure mokutora Testosterone Decanoate kuchaguma nekuwedzera maitiro e testosterone. Izvozvo zvinowanzoitika zvinogadzirwa nemunhu wese kana mutambi anofanirwa kutarisira kubva kune steroid iyi yakawedzera kuonda kwemisimba mashoma, simba rakawedzerwa, uye kuwedzera kukura kwehuwandu. Saka, unofanirwa kuve nechokwadi chokuti iwe unonamatira kuenzanisiro yakakwana, kudya, uye kushanda kwemigumisiro yakanaka.
Zvimwe kunze kwemigumisiro yakanaka, vamwe vashandisi vangaona vashoma vemu testosterone decanoate nemigumisiro kana zvigadzirwa zvisingashandisi kana kuti zvisina kudiwa. Kana vashandisi vane pasi pasi testosterone, vane madambudziko uye zvinetso hazvishamisi sezvavanongova ivo chete vachatsiva imwe nhamba ye testosterone iyo muviri yavo inofanira kunge yakagadzirwa. Mune zviitiko zvakawanda, migumisiro yemigumisiro inokonzerwa nokudarika kana kutora mishonga pasina kuenda kuchipatara kuongororwa. Haasi munhu wese anogona kushandisa testosterone decanoate kubva kune zvimwe zviitiko zvakadai sekurwadziwa kwemwoyo, kukwira kweropa mune mamwe matambudziko kunofanira kukudzivirira kubva pakushandisa chero steroid. Zvimwe zvezvinowanikwa testosterone decanoate madhara inosanganisira;
Kubviswa kwechimiro chekuberekwa kwe testosterone
Chibereko chekuwedzera mumurume
6.Testosterone decanoate hafu yeupenyu
Izvi zvinowedzera hafu yeupenyu hwe8days. Izvi zvinoreva kuti mushure mekuishandisa, zvinotora kumativi masere masere isati yapera chikamu chacho chinobuda mumuviri wako. Izvo zvinobatsira kubva pamazuva masere; zvinoreva kuti chirwere ichi chichava nenguva yakakwana yekuita chinangwa chayo chinangwa mumuviri. Upenyu hwakazara huchava mazuva anenge 16, zvinoreva kuti vashandi vachadikanwa kumirira kwenguva yakareba kuti vadzore muyero wakakwana. Nokudaro, iwe unongoda kutora danho imwechete muvhiki iyo inhau dzakanaka sezvo iri mishonga inoshandiswa. Pamberi pevhiki inopera nzvimbo yejojo ​​ichaporeswa, uye iwe uchave wakagadzirira kuwedzerwa dhigirii.
7.Testosterone decanoate benefits
Kubva pamigumisiro, zviri pachena kuti chigadzirwa ichi chinouya Testosterone decanoate benefits kuvashandisi vanosanganisira;
Inobatsira pakurema kwekukura
Chimwe chezvikonzero nei ichi chiwedzere ichidiwa nekuda kwekukwanisa kwaro kubatsira mukurasikirwa muviri pasina kurasikirwa nenyama yakaonda. Izvo zvinodaro kuburikidza nekusimudzira nhengo yemetabolism saka zvichibatsira vashandi kuti varasikirwa nemafuta nokukurumidza. Uyewo, yakakwana yekudya sezvo ichiita kuti vashandise vanzwe zvakazara kwenguva refu. Chimwe chezvikonzero zvinokonzera kuwedzera kwehutano hwemuviri ndiko kudya uye kudya kana kusina kukodzera dambudziko rinogona kubviswa kuburikidza nokutora mararamiro emvura.
Kunobatsira kunaka kwepabonde
Kune avo vanhurume vane zvinetso zvekuita zvepabonde sekurasikirwa kwechido chepabonde kana kuve nekushaya simba kwe erectile, izvi zvinowedzera zvakaratidza kuita zvishamiso, uye avo vakashandisa izvi vasati vasimbisa kuti zvinogona kukurumidza kuchinja matambudziko akadaro.
Izvi zvinowedzera mukuvandudza kushanda kwevatambi uye mizimba. Izvo zvinodaro nokuwedzera huwandu hwe testosterone, izvo zvinokosha kuti uwedzere kutsungirira kunyange panguva yekunyanyisa mabasa.
Zvakanaka nokuda kwechikamu chekucheka
Decanoate yakakodzera kukatora chikamu. Ichi ndechokuti inobvumira vashandisi kuti vapinde mumumhanyi asi vasina kurasikirwa nemisungo yavo yakaonda. Chinangwa chevatambi uye vashandi vekugadzirisa muviri ndechekugura mafuta akawanda uye muviri wehuremu nekuchengetedza muviri wakanaka, uye ndizvo chaizvo zvavanowana kubva kushandisa steroid. Testosterone decanoate inokurudzira nitrogen kuchengetedza inoita kuti urege kurasikirwa nemisungo yako yakawanikwa munguva yekucheka.
8.Testosterone decanoate Wongororo
Vaya vakashandisa chigadzirwa ichi kare vakachiongorora semubatsiri wekubatsira uye vakavabatsira kuona zvakawanda zvekuchinja kuburikidza nemitambo. Vazhinji vavo vakataura kuti kuwedzera kwainge kwavabatsira kuti vadzorezve zvepabonde, chimwe chinhu chavakanga vachitambura kwenguva yakareba. Vamwe vakataura kuti zviri kuburikidza nekutengesa kuti vakakwanise kupedza chirongwa chavo chekudya uye chekucheka, chimwe chinhu chavasingagoni kuita vasati vawana miedzo yekudzokera kudzoka kwavo. Vazhinji ndivo avo vakarumbidza ichi chiwedzere nekuda kwemigumisiro yaro yakareba uye kuti yakareba sei mumuviri. Vakatambi vaifarira kuti yakave yakavabatsira sei kuvandudza kushanda kwavo muminda, uye havana kuneta nekutsanya sekutanga.
Vashomanana chete vashandisi vakanyunyuta pamuromo wakaoma, acne, misoro yakagadzikana, uye erectile dysfunction. Vaya vakanyunyuta pamusoro pemigumisiro iyi vakabvuma kuti vakashandisa zvisina kunaka chirwere ichi uye vamwe vakashandisa chirwere ichi pasina kuenda kuchipatara kuongororwa.
9.Testosterone decanoate Sale
Kunyange zvazvo mishonga iyi isingatengeswi pachena pamusika, unogona kutenga nyore nyore Testosterone decanoate online. Iwe unogona kuutengawo zvakananga Testosterone decanoate kutengeswa kana iwe uchikwanisa kuzvitsvaga, taura navo zvakananga uye neizvi, unovimbiswa kuti uchange uchitora quality Testosterone decanoate. Zvisinei, iwe unofanirwa kuona kuti pamwe nekuwedzera kwekudiwa pakati pevatambi vakawanda uye vadzidzisi vemiti, pane kuwedzera kwevatengesi. Vamwe vavo vanonyadzisa uye vachakubatsirai kana iwe usingwarira zvakakwana kuwana mutengesi wemhosva.
Iwe unofanirwa kuita rumwe ruzivo pamusoro pezvinhu zvekuwedzera ichi kuti uone kuti hausi kuwana mitezo. Munyika dzakawanda, izvi zvinowedzera zvinorongwa semishonga inorongwa, iyo inotungamirirwa pasi pemvumo yakakodzera uye iwe unofanira, saka, chenjerera kuti usapinda kune rumwe rutivi rwemutemo. Iwe unogonawo Tenga Testosterone decanoate powder uye uite sirafu iwe pachako nokuda kwejisi. Ikoko kune sarudzo yekutenga testosterone decanoate muzhinji kana kuti yakakwana kuti iwe uende.
Usati uvimba nechimwe chekupa Testosterone decanoate, ita rimwe chekuchengetedza kuchengetedza kuti uve nechokwadi chokuti haisi unyengeri. Iwe unogona kutarisa mhinduro dzemuInternet kuti uone kuti vashandi vavo vekare vari kutaura nezvezvigadzirwa zvavo kana kukumbira shamwari dzako kana hama dzakashandisa chigadzirwa ichi vasati vatange kukurudzira vatengesi vavo. Cherechedza kuti kutenga chigadzirwa ichi pasina mushonga kunogona kuiswa sekutyora mutemo uye iwe unogona kuzviwana mutirongo kana iwe unogona kutarisana nemari yakawanda.
Icho chimwe chigadzirwa Testosterone Cypionate zvakare chakakurumbira chinoshandiswa pakugadzira muviri, kuti uwane mamwe mashoko funga reference article Testosterone Cypionate: Zvose Muviri Wekufanirwa Kuziva
10.Testosterone decanoate VS Testosterone undecanoate yekuvaka muviri
Migumisiro yaunowana kubva kune zvinhu zviviri izvi zvakafanana, asi Testosterone decanoate inonyanya kufarirwa pamusana pekukwanisa kwayo kupa mitsva yakajeka uye kuti yakanyatsogadzirisa sei pakutsvaira uye kuenderera mberi. Inobatsira kune vashandi venyama vari kutarisira kuchengetedza muviri wakanaka pasina kurasikirwa nemisumbu. Inowanzonziwo nekuda kwehuwandu hwemigumisiro kana yakashandiswa zvakakodzera. Zvisinei, zvose mapurogiramu anogonawo kukubatsira kuti uwane zvinangwa zvebasa rako somudziri wemiti kana mutambi.
Sivacoumar, R., Vinoth, M., & Alex, ZC (2012). P1. 1.3 Tapered Optical Fiber BioSensor yeTesttosterone Detection. Tagungsband, 821-825.
Papa, HG, & Kanayama, G. (2012). Anabolic-androgenic steroids. In Kushandisa zvinodhaka nekudhakwa mune zvekurapa (pp. 251-264). Springer, New York, NY.
Solimini, R., Rotolo, MC, Mastrobattista, L., Mortali, C., Minutillo, A., Pichini, S. ... & Palmi, I. (2017). Hepatotoxicity inobatanidza kushandiswa kwakashata kwevanabolic androgenic steroid mu doping. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 21(1 Suppl), 7-16.
P Busardo, F., Frati, P., Di Sanzo, M, Napoletano, S., Pinchi, E., Zaami, S., & Fineschi, V. (2015). Izvozvo zvinokonzerwa nandrolone decanoate pamutambo wepamusoro wemagetsi. Current neuropharmacology, 13(1), 122-131.